၏အနံနှင့်အတိမ်အနက်ကို စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ကျယ်ပြန့်သည်သေးယင်း၏ဘာသာစကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတိအကျနှင့် sententious ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း Percival ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရာမှအစပြုလျက်, ထို့ကြောင့်မြေတပြင်လုံးအထည်တစ်လျှောက်လုံးတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုလိုတာကလုံးဝမူလဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာမှနျးသို့မဟုတ်ကွေးမြားမ hypothesize မထားဘူး။ သူကမျှမ parenthetical မှတ်ချက်တွေကိုမှန်ကန်စေသည်။ အရပျထဲကအဘယ်သူမျှမစကားလုံး, အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်အရေးပါမှုမပါဘဲကြောင်းဘယ်သူမျှမစကားလုံးဖြစ်ရှိပုံရသည်။ တမျဉ်းပြိုင်များနှင့်အနောက်တိုင်းပညာကိုသွန်သင်တွင်ပါရှိသောဖြစ်ကြောင်းများစွာသောအခြားအခြေခံမူများနှင့်သဘောတရားများကို၏ extension များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းလည်းအသစ်ကြောင်းအများကြီးပင်ဝတ္ထုများနှင့်ကစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်ကိုတွေ့။ Percival သူသည်မိမိအတင်ဆက်မှု၏ယုတ္တိဗေဒသည်သူ၏ထုတ်ဖော်၏အချိန်ကိုက်များနှင့်အစီအစဉ် dictate ခွင့်နှင့်အတူရှိအဖြစ်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုရဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းခြင်းမှမိမိကိုမိမိခုခံကာကှယျအကြောင်းကိုအဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့ရာတွင်ထိုသို့စီရင်တော်မူခြင်းအဆောတလျင်ပေမယ့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မသမ္မာသတိရှိသောလိမ့်မည်။ Percival ဖတ်နေသည့်အခါ "ဟုပညာရှိမှတရားစကားတော်" တွင် Heindel ရဲ့အသနားခံညီတူညီမျှသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်: "အလုပ်၏လေ့လာမှုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်၎င်း၏အရည်အချင်းကိုသို့မဟုတ်အကုသိုလ်၏သူ့ကိုကျေနပ်လိုက်ပါတယ်တိုင်အောင်စာဖတ်သူဖြစ်စေချီးမွမ်းအားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေနှိမ်သို့မဟုတ်အပြစ်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ "
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny HW Percival တို့ကအစဉ်အဆက်ရေးထားသောအထူးခွားဆုံးစာအုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသက်အရွယ်အရွယ်မေးခွန်း Quo Vadis နှင့်အတူဆကျဆံ? ကျနော်တို့အဘယ်အရပ်ကလာသနည်း ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအရပ်၌ရှိသနည်း ဘယ်သွားနေကြတာလဲ? သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းဘဝအသက်တာ၌, အပြုအမူ, တ္ထုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖြစ်လာဘယ်လိုရှင်းပြသည်။ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤအတှေး, ငါတို့နှင့်အခြားသူများအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း။ Percival အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများတွင် "ပရမ်းပတာ" အဖြစ်ပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်စတင်, သူ၏လက်ရာကွပ်ထားတယ်အဖြစ်ရီးရဲလ်အတွေးအခေါ်စတင်မည်ဆိုပါကမြင်စေနိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အမိန့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။ Percival ကိုယ်တော်တိုင်သူတစ်ဦးတရားဟောဆရာမဟုတ်သလိုဆရာလည်းမပင်ဖြစ်သည်အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်လှမ်းရေးအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ cosmology တွေ့ရမယ်။ အမိန့်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဠာ။ အဘယ်သူမျှမအဆုံးမရှိတဲ့စာအုပ်အစဉ်အဆက်ကဤစာအုပ်ထဲတွင်မရရှိနိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စုံစုံသတင်းအချက်အလက်များတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အမှန်ဆိုသည်ကား, မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေး!